Permalink Reply by Zar Ni Minn on February 3, 2012 at 5:33pm glad to see your messages bro Zaw Myo and PyiPhyo
The technical fields are so wide, there may be same and different things. I agree it's need to know in all fields but should do one profession. I'ld like to say u two, there are major subjects and minor subjects for one student in university because it's necessary. But it's impossible to combine the two subjects.
Permalink Reply by Lynn Zaw on February 5, 2012 at 3:23pm You can say that better we are universal, and different earth.
Permalink Reply by zaw myo oo on February 5, 2012 at 8:19pm :)
Lynn Zaw said:
You can say that better we are universal, and different earth.
Permalink Reply by Zar Ni Minn on February 5, 2012 at 8:52pm right bro :D Lynn Zaw said:
Permalink Reply by zaw myo oo on February 5, 2012 at 9:13pmွှ မတူညီတယ် ဘဝပေါင်းဆက်လိုမရဘူးဆိုတာ တကယ်မှန်တယ်။ အကို တို ကျွန်တော် ကို IT ဆိုတာ ဘာတွေလုပ်ဆောင့် တယ် ဆိုတာ ရုင်းပြပေးပါ။concept တွေ က ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ရုင်းပြပေးကျပါ။
Permalink Reply by Lynn Zaw on February 6, 2012 at 2:39pm You should better read Principle of Computer Programming and Principle of Networking. Then you can came in discussion board. it will help you to write your comments. ▶ Reply
Permalink Reply by Min Naing on February 7, 2012 at 3:23am Zar Ni Minn Vs pyiphyomgmgsoe
= Knowledgeable Articles =
( Much Like ) Thanks !
Permalink Reply by zaw myo oo on February 7, 2012 at 2:29pm bro lynn zaw
havealook my profile than write u r comments .
You should better read Principle of Computer Programming and Principle of Networking. Then you can came in discussion board. it will help you to write your comments. ▶ Reply
Permalink Reply by Win Min Tun on February 7, 2012 at 4:18pm အကိုတို့ ငြင်းတာ ဗဟုသုတလဲရပါတယ်၊ ရယ်လဲရယ်ရပါတယ်၊ တစ်ခုပါပဲ၊ နောက်ပိုင်း ငြင်းချက်တွေက အင်္ဂလိပ်လိုတွေဆိုတော့ ကျွန်တော် လို E သိပ်မရတဲ့လူတွေကို ငဲ့ပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by pyiphyomgmgsoe on February 24, 2012 at 6:16am I don't have so many knowledgeable than Zar Ni Min :) :P Min Naing said:
Zar Ni Minn Vs pyiphyomgmgsoe
Permalink Reply by pyiphyomgmgsoe on February 24, 2012 at 6:59am ခိုက်သွားပြီးဗျို့ . . . zaw myo oo said:
bro lynn zaw
Permalink Reply by pyiphyomgmgsoe on February 24, 2012 at 7:04am ဟီးဟီး ပျင်းနေလို့ နည်းနည်းဝင်ပြောလိုက်အုန်းမယ် . . . အနာဟောင်းကို စွတာတော့ဟုတ်ပါဘူး ဗျာ . . .
ကျွန်တော်ကတော့ programming and networking concept တူတယ်ဆိုတာတဲ့ အချက်ကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ . . . အဲ့နှစ်ခုမှာ့ မဟုတ်ပါဘူး . . . အပြင်လောက အရာလေးတွေနဲ့ပါ တူတယ် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ် . . . အကို ကို တစ်ခုပြောလိုက်မယ် . . . သေချာ မြင်တတ်တွေးတတ်ရင် . . . networking စာလေ့လာနေတုန်း programming စာလေ့လာနေတုန်းမှာဘဲ . . . မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ တရားသဘောတွေကို မြင်နိုင်လို့ပါ . . . ဘာသာရပ် တစ်ခု ဆိုတာ အပေါ်ယံလေးဘဲ ဖတ်လိုက်ယုံနဲ့ ပြီးသွားတာ မကောင်းပါဘူး . . . ဆက်စပ် တွေးခေါ်မှုတွေ ရှိတာ ကောင်းတယ် လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယူဆပါတယ် . . . Zar Ni Minn said:
network က OSI7layers နဲ့ programming က OOP နဲ့ concept တူတယ်လို့ ပြောချင်တာလားဗျာ
ကျွန်တော် ထင်သာမြင်သာ ရှိတာကိုပဲ ပြောပါ့မယ် ... လူနှစ်ယောက် (A and B) စကားပြောတယ် ဆိုပါစို့ဗျာ ပြောဖို့အတွက် ပါးစပ် (transmitter) ၊ နားထောင်ဖို့အတွက် နား (receiver) ၊ data carry လုပ်ဖို့အတွက် လေ (medium) ၊ အပြန်အလှန် နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ဘာသာစကား (protocol) တစ်ခုခု အဲဒါတွေကို networking ကလုပ်ပေးရပါမယ် ... နောက်ပြီး A က နားကန်းနေပြီးတော့ B က လျှာပြတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ A က transmit B က receive ပေါ့ဗျာ နှစ်ယောက်လုံး အကောင်းဆိုရင်တော့ အပြန်အလှန် communicate ပေါ့ဗျာ ဆရာက ကျောင်းသားတွေကို စာသင်နေတဲ့ ပုံစံ ဆိုရင်တော့ broadcast ပေါ့ဗျာ အဲဒါတွေက network ရဲ့ အခြေခံ concept တွေပါ
programming ကတော့ CPU ကို ဘာလုပ် ဘာပြီးရင် ဘာလုပ် ဘယ်လိုလာရင် ဘယ်လိုလုပ် ဆိုပြီးတော့ အမိန့်ပေးရတဲ့ CPU ရဲ့ commander တွေပါ .. အဲဒီနှစ်ခုတူတယ်ဆိုရင်တော့ အကိုနဲ့ ကျနော် အယူအဆ လွဲတာသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
CPU ကို command ပေးတဲ့ အခါမှာလည်း user နဲ့ programmer မတူပါဘူး အကိုတို့ ipconfig လို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ip address configuration တွေ screen မှာ ပေါ်လာအောင် ကျနော်တို့ programmer တွေ အများကြီး ဦးနှောက်ခြောက်ခံထားရပါတယ်
ကျနော် ဒီ message ကို reply ပြန်လိုက်တဲ့ အခါ message ဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ gateway ကနေတစ်ဆင့် myanmaritpros ရဲ့ web server ဆီကို ရောက်သွားပါတယ်.. အဲဒီကနေမှာ database server ရဲ့ database ထဲ့ကို ရောက်သွားပါတယ်..
အဲဒီလို ရောက်သွားဖို့အတွက် transmitter တွေ receiver တွေ media တွေ protocol တွေ ရှိရပါမယ် ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက ကျနော်တို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ကျနော် အောက်က add reply ဆိုတဲ့ button လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် client side မှာ CPU ဘာလုပ်ဘာလုပ် server side မှာ CPU ကို ဘာလုပ်ဘာလုပ်ဆိုပြီး ခိုင်းရတာ ကျနော်တို့ အလုပ်ပါ add reply ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကိုတို့နဲ့ ဆိုင်ပါသလား ခင်ဗျာ programming နဲ့ networking တူတယ် မတူဘူး ဆိုတာ ကျနော် စိတ်မ၀င်စားပါဘူး ကျနော် စိတ်ဝင်စားတာ technical concepts တွေပါ
discussion လုပ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Thet Aung postedadiscussionလုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း23 hours ago 0